RIP Manu Brajaki - मनु ब्राजाकीलाई श्रद्धान्जली
Topic: RIP Manu Brajaki - मनु ब्राजाकीलाई श्रद्धान्जली
Author Topic: RIP Manu Brajaki - मनु ब्राजाकीलाई श्रद्धान्जली (Read 5255 times)
« on: February 03, 2018, 11:57:53 AM »
Senior litterateur Manu Brajaki passed away Friday morning at the age of 75. He was being treated for brain hemorrhage at the Patan Hospital, according to litterateur Sunil Puri.
He is survived by his spouse, one daughter and one son. “Timri Swasni ra Ma” and “Annapurnako Bhoj” are among famous collections of stories written by Bajaki,awell-known author in the Nepali literature.
He has written many newspaper articles on contemporary issues and was perfectly competent in gazal writing.
Published Date: Friday, February2, 2018
गजल : हाँस्न पनि पाइएन
by - Manu Brajaki
रुन पनि पाइएन, हाँस्न पनि पाइएन।
रोई-रोई आँसुले मन धुन पनि पाइएन।
तिमीलाई छोयो भने छोइछिटो लाग्नेहोला,
फूलजस्तो आत्मीयता छुन पनि पाइएन।
कतैतिर नलागेर आफूभित्रै बसेपछि,
दोष पनि पाइएन, गुन पनि पाइएन।
खोलाजस्तो बग्छ आँखा, बगरमै बसेको छु,
बालुवा त बग्यो सबै सुन पनि पाइएन।
गीत लेखी पठाएछौ नफर्किने बाचा गरी,
एकान्तमा गाऊँ भने धुन पनि पाइएन।
भौँतारिँदै टाढाटाढा जतिसुकै पुगे पनि,
तर यहाँ ‘मनु’जस्तो हुन पनि पाइएन।
-सैँबु, भैँसेपाटी, ललितपुर
« Last Edit: February 04, 2018, 12:54:03 AM by tundikhel »
Re: RIP Manu Brajaki - मनु ब्राजाकीलाई श्रद्धान्जली
« Reply #1 on: February 03, 2018, 11:59:34 AM »
Renowned novelist Manu Brajaki has passed away.
The 75 year old ace writer breathed his last on Friday morning. Brajaki was undergoing treatment at the Patan Hospital after suffering from brain haemorrhage.
He is survived by his spouse and two children-ason andadaughter.
The late Manu Brajaki was known not only for his fictional works but also for his keen penmanship on contemporary issues.
« Reply #2 on: February 03, 2018, 12:17:34 PM »
ब्राजाकी : पत्रम्पुष्पम् जिन्दगी
माघ २०, २०७४देवेन्द्र भट्टराई
काठमाडौँ — उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएर कला विषय पढिरहेका बेला दुर्गा बरालले चेतमानलाई भेटेका रहेछन् । ‘काठमाडौंमा पनि अचानक भेट भयो । उनले भने– मैले त नाम चेन्ज गरेँ नि । म अब कुनै भण्डारी–सन्डारी होइन, मनु ब्राजाकी भएँ,’ उनले सुनाएका थिए ।
सानैदेखि बिद्रोही र बाहिरिया स्वभावका थिए–चेतमानसिंह भण्डारी । महोत्तरीको औरहीमा सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका चेतमान सानैदेखि स्वभावले ‘ऐकान्तिक,’ एक्लो चिन्तन गर्ने अनौठो अभ्यासमा रमाउने गर्थे । सानैदेखिको विद्रोही र फरक स्वभाव लिएर उनी घर छाडेर बाहिर निस्किएका थिए । ११ वर्षको उमेरदेखि उनी फिरन्ता बनेका हुन् । नेपालका विभिन्न भाग हुँदै बनारस र पछि पोखरा पुगेर उनी अलिक समय अडिएका थिए ।
चेतमानका समवयी र समकक्षी हुन्—कलाकार दुर्गा बराल । २०१६ सालतिर पोखराको मल्टिपर्पस नेसनल हाईस्कुलमा कक्षा ८ मा भर्ना हुन आइपुगेका थिए चेतमान । विशेषत: चेत र दुर्गा दुवैजनामा सिर्जनशील स्वभाव भएकाले र दुवैमा कविता–कथा–चित्रका सिकारु अभ्यास गर्ने अभिरुचि भएकाले ती ‘अन्तरंग’ बनेका थिए ।
दुर्गा पानीरङमा चित्र बनाउँथे, यदाकदा कविता पनि लेख्थे । चेतमान भने कथा लेख्थे, चित्रमा पनि उत्तिकै रुचि राख्थे । एउटा प्रतियोगितामा दुर्गा चित्रमा प्रथम भए, मनु साहित्यमा । ‘नपुगिने बाटो नहिँडेकै राम्रो हुने रहेछ भनेर मैले चित्रकारिता छाडें, दुर्गाले साहित्य’, केही वर्षअघि आफ्नो स्कुले उमेर सम्झिरहेका थिए चेतमान । पोखराबाटै हुलाक–पत्रमा कथा, कविता लेखेर काठमाडौंका साहित्यिक पत्रिकामा छाप्न पठाइरहने स्वभाव उनमा थियो । त्यसबेला चेतमानको साहित्यिक नाम हेमन्त हरि, सगर नासरत्य आदि थियो । तर, मीठो भाषा र शैलीमा लेखन क्षमता राख्ने भएकाले उनका प्राय: रचना छापिएकै हुन्थे ।
मस्तिष्काघातको उपचार क्रममा शुक्रबार बिहान पाटन अस्पतालमा निधन भएपछि तिनै पुराना मित्र दुर्गा बराल पोखराबाट चेतमान उर्फ मनु ब्राजाकीलाई सम्झिरहेका थिए । ‘हामीले ८ कक्षादेखि एसएलसीसम्म सँगैपढ्यौं,’ दुर्गाले सुनाए, ‘तर चेतमान भने एसएलसी सेन्टअपमै थन्किएको थियो । यसको पनि अनौठो कहानी छ, जसलाई पोखरामा मेरा समकालीनहरूले अझै सम्झिरहेका छन् ।’ सेन्टअपमा नेपाली विषयका लागि १८ नम्बरको एउटा पेपर रहेछ, जहाँ धेरैवटा प्रश्नोत्तर थिए । एउटा भने सप्रसंग व्याख्या गर्नुपर्ने सन्दर्भ रहेछ, कवि लेखनाथको ‘पिंजडाको सुगा’ माथि । त्यही प्रश्न र सन्दर्भले चेतमानको नाम भिन्न अर्थमा फैलिएको रहेछ ।
‘परीक्षा दिन हामी बसिरहेका थियौं । चेतमानले त खुरुखुरु कपी थपेको थप्यै गरे । १८ पेज लेखिसकेपछि परीक्षाको समय सकिएर कापी बुझाएका थिए,’ दुर्गा सम्झन्छन्, ‘भरेभन्दा उनी त्यही नेपाली पेपरमा फेल भए ।’ पछि कुरा बुझ्दा, त्यही ‘पिंजडाको सुगा’ माथि मात्रै १८ पेज लामो व्याख्यान गरेर चेतमानले परीक्षाको ३ घण्टा बिताएका रहेछन् । त्यो घटनापछि पास–फेलको सूचीसँगै दुर्गा र चेतमान आआफ्नो बाटा लागे ।
धेरैपछि उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएर कला विषय पढिरहेका बेला दुर्गाले चेतमानलाई भेटेका रहेछन् । ‘काठमाडौंमा पनि अचानक भेट भयो । उनले भने– मैले त नाम चेन्ज गरेँ नि । म अब कुनै भण्डारी–सन्डारी होइन, मनु ब्राजाकी भएँ,’ खुसी स्वरमा उनले सुनाएका थिए ।
‘हत्तेरी के नाम हो यस्तो ?’, दुर्गाको जिज्ञासा थियो– ‘रसियन नामजस्तो छ नि ?’
‘होइन–होइन । त्यसै अल्छी लागेर बसिरहेको थिएँ, फ्याट्टै मनु ब्राजाकी भन्ने नाम मेरो मुखमा आयो । त्यही भएर यही नाम राखेँ,’ त्यसबेला नामको स्वन्वारान गर्ने मनुले भनेका थिए । त्यसपछि दुर्गा पनि चित्रकारिताको दुनियाँमा ‘वात्स्यायन’ भनेर चिनिँदै थिए, चेतमान पनि मनु ब्राजाकीका रूपमा ।
अर्को एउटा प्रसंगमा मनुलाई सोधेकोथिएँ– ‘के हो यो ब्राजाकीको अर्थ ?’
मनुको जवाफ थियो– ‘ब्राजाकीको अर्थ बुझ्नुभएन भने सम्झनुहोस् त्यो मै हुँ ।’
साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतम आफ्ना समवयी ब्राजाकीलाई नेपाली कथा साहित्यमा निकै उच्च मूल्यांकन गरिनुपर्ने स्रष्टाका रूपमा लिन्छन् । तर, गौतमका मूल्यांकनमा कतिपय अर्थमा ब्राजाकी ‘इग्नोर्ड’(अन्डररेटेड) साधक हुन् । सामान्य विषय र पृष्ठभूमि समातेर पनि गम्भीर लेखनको स्वाद दिन सक्ने ब्राजाकीलाई ‘व्यंग्य, शिल्पगत सौन्दर्य र आञ्चलिकता’का आधारमा विशिष्ट स्रष्टाका रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने डा. गौतमको भनाइ छ । झन्डै डेढ दशकअघि पहिलोपटक मस्तिष्काघात भएपछि बाहिरी भेटघाट र साहित्यिक संगतमा कमै समय दिइरहेका ब्राजाकी पछिल्लो समय ‘मेरो चेतनाको जीवनयात्रा’ नाममा आत्मकथाको टिपोट उतारिरहेका थिए, तर यसको अन्तिम ड्राफ्ट बनिसकेको थिएन । ब्राजाकीका ‘अवमूल्यन’, ‘आकाशको फल’, ‘तिम्रीस्वास्नी र म’, ‘पारदर्शी मान्छे’, ‘अन्नपूर्णाको भोज’ कथासंग्रह प्रकाशित छन् । उनी साझा पुरस्कार, मैनाली कथा पुरस्कार, महाकवि देवकोटा पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान आदिबाट पुरस्कृत छन् ।
ब्राजाकीलाई अमेरिकी कथाकार ओ हेनरीको कथा टुंग्याउने शैली खुबै मन पथ्र्यो । भारतीय कथाकार सहादत हसन मन्टोको वर्णन शैली र विभूतिभूषण बन्दोपाध्यायको लेखनशैली मन पथ्र्यो । ‘कथा लेखनमा कथा टिप्ने, बुन्ने र भन्ने मनुशैली आफैंमा अद्वितीय छ । साना विषयलाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्ने उहाँको क्षमता धेरै कम नेपाली कथाकारमा होला,’ आख्यानकार नयनराज पाण्डे भन्छन्, ‘त्यो तहमा भाषालाई खेलाउने सामथ्र्य निकै थोरै नेपाली लेखकमा छ । होला, तर मैले भने अरूमा त्यस्तो सामथ्र्य भेटेको छैन ।’ कथाशिल्पमा परिवेश र चरित्रचित्रण एकदमै स्थापित गराउँदै लैजाने क्षमता भएका कथाकार ब्राजाकीको ‘अन्नपूर्णाको भोज’ एउटै कथामा स्थापित अन्नपूर्णा (पात्र) को उदाहरणलाई आफूले विशिष्ट रूपमा लिएको पाण्डेले बताए । त्यसरी ‘एउटा पात्र थाहा नभईकन स्थापित हुने कथाशिल्प’ आफैंमा विशेष रहेको उनको मूल्यांकन छ ।
आफूलाई गजल लेखनमा उत्प्रेरित गर्ने र मनमा लागेका कुरा सुझाउने अन्तरंग मित्रका रूपमा मनुले गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेललाई लिएका थिए । पौडेलले भने आफूले मनुका गीत–गजल प्रकाशनमा मात्रै सघाउ पुर्‍याएको प्रतिक्रिया दिए । लेखनमा नवचेतनावादी धाराका प्रयोक्ता भनेर समीक्षकले टिप्पणी गर्ने कथाकार ब्राजाकी जीवन जिउने कुरामा भने अलिक ‘लापरबाह’ थिए । विशेषत: रक्सी र चुरोट पिउने मामलामा खुबै चिनिए मनु । ‘त्यो उनको लापरबाह जीवनशैलीका बारेमा मैले पनि भेटमा चासो राखेको थिएँ,’ डा.गौतम भन्छन्, ‘तर, कसैको जीवन जिउने काइदामा हस्तक्षेपकारी भएर बोल्न वा केही भन्न सक्ने स्थिति रहेन ।’ कुनै पनि सहर वा भीडभाडसँग आफ्नो खासै आत्मीयता र सान्निध्य नरहेको मनु बताइरहेका हुन्थे । हँसीमजाकको बोलीमा मनु भन्थे, ‘यहाँ काठमाडौंमै पनि गल्लीपिच्छे जाँड पसल छन् । कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ— यहाँका हरिया पर्दा पसल (भट्टी) का ठाउँमा पुस्तक पसल मात्रै भइदिएको भए म अर्कै मनु ब्राजाकी हुन्थेँ कि ?’
मनु पछिल्ला वर्षहरूमा संगत र सक्रियता आधारमै अलिक ‘आउटसाइडर’ बनेका देखिन्थे । आज लेखेर भोलि चर्चामा आउन चाहने र धेरैजसो फूलगुच्छासहितको समीक्षा अपेक्षा गरेर ‘केही पादटिप्पणी’ लेखाइमाग्न आउनेहरूप्रति मनु निकै विरक्तिएका थिए । ‘यहाँ आफ्नै जीवनकालभर लेखेर केही भएन, खोइ के भयो र ?’, उनका छेउमा पुग्ने पत्रकारसँग उनी भनिरहेका हुन्थे, ‘थोरबहुत नाम बन्यो, अरू त्यस्तै हो । कमाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने ‘पत्रम्पुष्पम्’ मात्रै भयो । सिंगो जीवन पत्रम्पुष्पम्मा चलेको छ, यसैगरी बित्लाजस्तो छ ।’
प्रकाशित : माघ २०, २०७४ ०७:१०
« Reply #3 on: February 04, 2018, 12:43:09 AM »
एउटा यायावरको आत्मकथन- लेख्नका लागि रक्सी खाएँ, रक्सी खाएर लेखिनँ
घनेन्द्र ओझा | १ वर्ष अघि
असोज ७, २०७३ पूर्वी तराईको मध्यम परिवारमा जन्मेको एउटा बालक ६ वर्षको उमेरमा हजुरबुबासँगै वनारस पुग्छ। वनारसको वातावरणमा घुलमिल हुन केही समय लाग्छ। त्यहीँको विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न थाल्छ। हिन्दी, उर्दूभाषी साथीहरूसँगको सङ्गतले ५ कक्षामा पढ्दादेखि नै पुस्तकालय र वाचनालय जाने बानी पार्छ। यही बानीका कारण उसले किशोरावस्थामै हिन्दी, उर्दू र केही अन्य भाषाका साहित्य र दर्शनका पुस्तकहरू छिचोल्छ। बिस्तारै ऊ आफैँ साहित्यलेखनमा होमिन्छ, त्यहीँ हेलिन्छ र उत्रनै नसक्ने गरी डुब्छ- चुर्लुम्मै। राणाकालीन समयमै हजुरबुबाले आफ्नो व्यावहारिक जिम्मेवारी आफ्ना छोराहरूका काँधमा हालिदिएर जनकपुर बस्न थाल्छन्, नातिलाई सँगै लिएर। जनकपुरका त्यसबेलाका प्रख्यात विद्वान् कुलचन्द्र गौतमको सल्लाहमा हजुरबा धर्म कमाउन वनारस जान्छन्। आफूसँगै ल्याएको नातिलाई पनि सँगै वनारस लैजान्छन्। तीन कक्षासम्म जनकपुरमै पढेपछि बाँकी वनारसमा पढ्छन्। पछि नेपाली भाषाको अध्ययन गर्ने इच्छाले पोखराको मल्टी पर्पस नेशनल हाई स्कुलमा भर्ना हुन्छन्।
सुरुसुरुमा वनारसमै रहँदा हिन्दी, उर्दू साहित्यको अध्ययनको प्रभाव वा साथी सङ्गतको प्रभावका कारण हिन्दी भाषामा कविता, शायरी लेख्ने गरेका थिए उनले। पछि जानी नजानी गजल पनि लेख्न थाले। पान गोष्ठीहरूमा आफ्ना शायरी र गजल सुनाउन थाले। यो साहित्य लेखनको भोक झनझन बढ्दै गयो उनमा।
अचानक ११ वर्षको उमेरमा उनमा उटपट्याङ आयो- हजुरबुबाको खल्तीबाट भारु २० रुपियाँ निकालेर हिँडे। बिहारको पटना आए। त्यसपछि कता गए, केके गरे, त्यसको हिसाबकिताब निकै लामो हुन्छ। यहीँबाट उनको वास्तविक जीवनयात्रा सुरु हुन्छ- यायावर जीवन।
नेपाली साहित्यका विशेषगरी कथा र गजलका सशक्त र लोकप्रिय स्रष्टा मनु दाइ अर्थात् मनु ब्राजाकीको जीवन भोगाइ बडो विचित्रको छ। ११ वर्षको उमेरदेखि यायावर जीवन बाँचेका मनु उसबेलै भारतका प्रायः सबै क्षेत्रमा घुमे। कुनै निश्चित उद्देश्य नलिई विशुद्ध यायावरी शैलीमा हिँडेका उनको लेखनमा त्यही यायावरी जीवनका आरोह-अवरोह, त्यस जीवनमा उनले देखेको जीवन, भोगेका अनुभूति, परिवेश र पात्र पाइन्छ। वि. सं. २०६० सम्म नै उनको यस्तो यायावरी जीवन चलिरह्यो। २०६० मा 'ब्रेन स्ट्रोक' भएपछि उनको यायावरी जीवनमा केही कमी आयो भने पुनः दोस्रो पटकको स्ट्रोकपछि भने उनी हिँडडुल गर्न नसक्ने भए। यद्यपि, उनको लेखन भने निरन्तर छँदै छ।
होटलमा काम : सबैभन्दा छिटो र सजिलो
मनुले ११ वर्षकै उमेरमा हजुरबाको साथ छाडेर एक्लो घुमन्ते जीवन बिताउन थालेपछि उनका जीवनमा अनेक समस्या आए। एकातिर हजुरबाको खल्तीबाट निकालेको २० रुपियाँ भारु केही दिनमै सकियो, अर्कातर्फ भन्नेबित्तिकै काम पाइहाल्न पनि गाह्रो। अझ नयाँ ठाउँमा नचिनेका ठाउँमा कसले दया गर्छ ? यस्तो बेलामा उनले निर्णय गरे, जे काम पाइन्छ, त्यही गरिन्छ। हो, मनुले पनि भेटेजति काम गरे, काममा कुनै विभेद गरेनन् उनले। उनको अनुभवमा सबैभन्दा छिटो पाइने र सजिलो काम भनेको होटलमा भाँडा माझ्नु हो। 'होटलमा भाँडा माझ्न जहाँ पनि पाइने', आफ्नै विगतलाई व्यङ्ग्य गरेझैँ गरी मुस्कुराउँदै भने, 'पेटभरि खान र आनन्दले सुत्न पाइने।' उनले निकै समय यसरी होटलमा भाँडा माझेर बिताए।
« Reply #4 on: February 04, 2018, 12:52:41 AM »
जीवन गाउँमा छ
मनुले आफ्नो यायावरी जीवनमा देखेको सत्य हो- जीवन गाउँमा छ। उनले जे जति ठाउँमा घुमे, त्यहाँको जीवनलाई सूक्ष्म रूपले हेरे। जीवनको समग्र पक्षको सूक्ष्म अवलोकन गरे। निष्कर्षमा वास्तविक जीवन त गाउँमा मात्र भेटे। सहर उनका लागि ढोँगी, स्वार्थी र खोक्रो छ। गाउँको जीवनमा करुणा छ, हार्दिकता छ, दुख र सुखको अनुभूति छ, सद्भाव र आत्मीयता छ, यी यावत् कुरा सहरमा उनले कहिल्यै पाएनन्। यसर्थ उनले सहर भन्दा ग्रामीण दुःखका वस्तीमा घुम्ने र त्यहाँको जीवन अध्ययन गर्ने निर्णय गरे। त्यहीँबाट अनेक कथा र गजल जन्माए।
जीवनको समग्रताभित्र यौन
मनुले आफ्ना कथामा विशेष सूक्ष्म रूपले यौनलाई उद्‍घाटन गरेका हुन्छन्। तर गजलमा भने यौनलाई उति महत्त्व दिएका छैनन् । भन्छन्, 'कथामा जीवनलाई समग्रतामा समेट्नुपर्ने हुन्छ, र जीवनको समग्रतामा यौन अनिवार्य हुन्छ।' उनका विचारमा गजलमा चाहिँ जीवनको आंशिक पक्ष मात्र प्रस्तुत गरिन्छ। मनुले आफ्ना सिर्जनामा काल्पनिकता कमै मात्र प्रस्तुत गरेको दावी गर्छन्। जीवन कल्पनामा होइन, यथार्थमा भोगिने कुरा हो भन्ने उनको मत छ। यही मतको उद्‍घाटन आफ्ना सिर्जनामा गरेको उनको भनाइ छ। 'मेरा पात्र, परिवेश र घटना यथार्थ हुन्', मनु भन्छन्, 'यथार्थ घटना, परिवेश र पात्रलाई साहित्यिक रूप दिएको मात्र हुँ।'
उनले धार्मिक विषयमा भने सिर्जना गरेनन् रे! 'आफूलाई कहिल्यै भगवान् र देवीद्यौतामाथि विश्वास नै नलागेपछि धर्म (अहिले भनिँदै आएको) माथि विश्वास लागेन', मनु भन्छन्, 'धर्म भनेको मानवतासहित हुन्छ, मानवतारहित धर्म धर्म होइन।' यसर्थ उनले मानवका, मानवीय संवेदनाका, पीडा र दर्दका, असन्तुष्टि र अभावका कथा मात्र लेख्न चाहे। 'मलाई न स्वर्गमा विश्वास छ, न नर्क नै हुन्छ भन्ने लाग्छ', मनु भन्छन्, 'अनि के कल्पना गरौँ ? जे देखेँ, जे भोगेँ त्यही लेखेँ।' तर यसको अर्थ उनले धर्म वा धार्मिक आचरण नबुझेका भने होइनन्। वनारस, जहाँ धर्म कमाउन मानिसहरू पुग्ने गर्छन्, त्यहीँ हुर्किएका, पढेका मनुलाई धर्मको अभ्यन्तर थाहा छ। वास्तवमा धर्ममा बढेको वा धर्मका नाममा बढेको विकृति देखेपछि उनलाई धर्मप्रति नै वितृष्णा जागेको जस्तो लाग्दोरहेछ। 'ढुङ्गामा फूल चढाएर धर्म हुन्छ र ?', मनुको जिज्ञासा।
जीवन नभोग्नेले जीवनका सिर्जना गर्दैन जीवन
नभोगी जीवनका सिर्जना गर्न नसकिने मनुको बुझाइ छ। जीवन बुझ्न हरेक ठाउँ, बस्ती र मानिससँग घुलमिल हुनुपर्ने र समाजका सबै प्रकारका पात्र, परिस्थिति र सुखदुःखको अवलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन् मनु। 'जीवनका सिर्जना गर्न वास्तविक जीवन बाँचिरहेका मानिससम्म पुग्नुपर्छ, उनीहरूका दुःख, सुख, अभाव, हाँसो, खुसी, पीडा, असन्तुष्टि बुझ्नुपर्छ', मनुको भनाइ छ, 'अनि मात्र सिर्जनामा जीवन्तता आउँछ, साहित्यमा जीवन आउँछ।' यसैका लागि भौँतारिए मनु झन्डै ५ दशक, यायावर बनेर।
आफ्नो बाल्यकाल, किशोरकाल र युवाकाल लगभग सबै समय भारतमै बिताए मनुले। उनले नपुगेका भारतका स्थान कमै होलान्। र, भारतका मान्छेका अभाव र दुःखसँग उनी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिए, अथवा भनौँ न उनीहरूसँगै खाए, बसे, काम गरे, दुखे, रमाए, रोए। नेपाल र भारतका अधिकांश परिवेश र दुःख उनले लगभग समान पाए। समान विचार, समान परिवेश, समान जीवन भोगाइलाई कथामा उने मनुले। त्यसो त नेपालका पनि अधिकांश भेगमा उनी घुमेका छन्। भन्छन्, 'वास्तविक नेपाल हेर्न ग्रामीण वस्तीमा जानुपर्छ।' ढोंगी सहरी सभ्यताप्रति उनलाई वितृष्णा छ। मान्छे जस्ताको भीड मात्र ठान्छन् सहरलाई। अथवा बुख्याँचा जस्तो, मुटु, मस्तिष्क, दया, माया, करुणा, विवेक नभएको। उनले सभ्यता, संस्कृति र आफ्नोपन गाउँमै मात्र रहेको बुझेका छन्। यसर्थ उनका सिर्जना पनि बढीजसो गाउँकेन्द्रित नै हुन खोज्छन्।
जीवन सङ्घर्ष मात्र हो
मनु जीवनलाई सङ्घर्ष, सङ्घर्ष र फेरि पनि सङ्घर्ष मात्र ठान्छन्। निरन्तरको सङ्घर्ष अथवा सङ्घर्षको निरन्तरता नै जीवन हो भन्ने लाग्छ उनलाई। 'यद्यपि, मान्छेको परिस्थितिअनुसार सङ्घर्षका रूप फरक हुन सक्छन्', मनु भन्छन्। उनका अनुसार जीवनलाई जिउँदो छ भनेर देखाउन वा बाँचेको छु भन्ने सावित गर्न पनि सङ्घर्ष अनिवार्य हुन्छ। यस्तो सङ्घर्ष व्यक्ति स्वयंप्रतिको, समाजप्रतिको र परिवेशप्रतिको हुने उनको बुझाइ छ। र, सङ्घर्षले नै मानिसलाई अघि बढ्न वा केही नयाँ गर्नका निम्ति ऊर्जा र गति दिने उनको धारणा छ।
लेख्नका निम्ति रक्सी खाएँ, रक्सी खाएर लेखिनँ
मनु ब्राजाकी भन्नेवित्तिकै उनलाई चिन्ने र उनका बारेमा सुन्नेहरूका मस्तिष्कमा एउटा चित्र नाचिहाल्छ, रक्सी खाएर खुट्टा ठेगानमा नटेकी हिँड्ने, केही रुपियाँ पैसा मागिहाल्ने स्रष्टाको। हो पनि उनले हिजोका दिनमा कति पिए, पिए रक्सी। भन्छन्, 'रक्सी त कति खाएँ, खाएँ तर मात्नका लागि होइन।' केका लागि त ? 'चिन्तनका लागि', मनु भन्छन्, 'लेख्नका निम्ति चिन्तन जरुरी छ, चिन्तनका लागि एकाग्रता आवश्यक हुन्छ।' यही एकाग्रताका लागि रक्सी पिएका हुन् रे उनले! रक्सी पिएपछि एक प्रकारको ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ रे! र त्यो ऊर्जाका कारण उनी पटक पटक सडकमा राखिएका बिजुलीका पोल र जनावरसँग ठोक्किएका छन् रे! 'तर मान्छेसँग अनावश्यक झगडा रक्सी खाएर कहिल्यै गरिनँ', उनको भनाइ छ। त्यसो त उनले रक्सीलाई ऊर्जा र चिन्तनको स्रोतका रूपमा मात्र प्रयोग गरे रे!
भन्छन्, 'लेख्नका लागि रक्सी खाएँ तर रक्सी खाएर कहिल्यै लेखिनँ।' भर्खरै उनको एउटा चर्चित कथासङ्ग्रह, जुन साझा प्रकाशनबाट छापिएको थियो, प्रकाशनका लागि एउटा निजी प्रकाशन गृहले ५० हजार रुपियाँ लिएर आएपछि उनी तीनछक परे रे! 'मैले आजसम्म यति पैसा कुनै प्रकाशकले दिएको देखेको नै थिएन', मनु भन्छन्, 'सपना हो कि विपना भयो।' पछि साझासँगको सम्झौता तोडेर सो पुस्तक प्रकाशनाधिकार निजी प्रकाशनलाई दिएछन् ।
त्यसो त अहिले मनु हिजो भन्दा धेरै भिन्न छन्। रक्सी पिउन छाडेको धेरै भएको छ, हिँडडुल गर्न पनि सहारा चाहिने अवस्था छ। आज भेटिने मनुले केही रुपियाँ माग्दैनन्, बरु उनले केही नयाँ गजल लेखेका छन्, त्यसलाई छापिदिने प्रकाशक खोजेका छन्।भन्छन्, 'रक्सी छाडिहालेँ, बाहिर हिँड्न सक्दिनँ, पैसा केका लागि चाहियो र?'
मनुले झन्डै दुई दशकअघि लेखेका कथाहरूको सँगालो निकाल्ने विचार गरेर तात्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा लगेर पाण्डुलिपि बुझाए- आमालाई बेच्नुहुन्न लाटा। तर आजसम्म सो पुस्तक छापिएन मात्र होइन, प्रतिष्ठानका जिम्मेवार अधिकारीसँग बुझ्न जाँदा पाण्डुलिपि पनि फेला परेन। यसमा मनुलाई साह्रै चित्त दुखेको छ। प्रतिष्ठान जस्तो जिम्मेवार निकायले एउटा स्रष्टाको पाण्डुलिपि यसरी हराउनु (लुकाउनु ?) सही काम होइन। उनले धेरै पटक सो पाण्डुलिपि प्राप्तिका लागि अनुनय गरिसके, तर अत्तोपत्तो पाइएन। अब त उनलाई शंका लाग्न थालेको छ, कतै आफ्नो शेषपछि कसैले उसको नाममा प्रकाशन गर्न लुकाएको छैन? (यो आशंका निवारण गर्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।)
जीवनलाई सङ्घर्ष मात्र ठान्ने मनु बाँच्न वा बाँचेको अनुभव गर्न पनि केही न केही गरिरहनुपर्ने धारणा राख्छन्। यही भएर आफ्नो शारीरिक अस्वस्थताका बाबजुद पनि उनी अहिले पनि कथा, गजल लेखिरहेका छन्। दुई दुई पटकको मस्तिष्काघातपछि शरीर र हात पनि राम्ररी चल्दैन, मस्तिष्कले पनि धेरै कुरा सम्झन र लामो समय सम्झिरहन सक्दैन, तथापि उनको सिर्जना गर्ने ऊर्जा भने मरेको छैन। उनको एउटा इच्छा अझै जीवित छ- आत्मकथा लेख्ने। उनका समकालीन जगदीश घिमिरेलगायतका साथीभाइले आत्मकथा लेख्न पहिल्यै सल्लाह दिएका पनि हुन्। तर उनले त्यसबारेमा त्यति ध्यान दिएनन्। जीवनको यो उत्तरवर्ती कालमा आएर उनी आफैँलाई लागेको छ, एउटा आत्मकथा किन नलेखूँ! आफ्ना यायावरी जीवनका अनुभव र भोगाइलाई दस्तावेजीकरण गर्नका लागि पनि उनी आत्मकथा लेख्ने तयारीमा छन्। तर उनको आत्मकथा अहिले बजारमा आएका भन्दा भिन्न हुनेछ। भन्छन्, 'अहिलेको हामीकहाँ लेखिँदै आएको र विश्व साहित्यमा लेखिँदै आएको भन्दा भिन्न शैली र ढाँचामा लेख्ने कोसिस गरेको छु।'
अन्त्यमा, मैले जीवनलाई बेस्मारी गाली गरिदिनुस् न भनेको थिएँ। मनुले प्रत्युत्तरमा भने, 'साँच्चै भन्दा जीवनप्रति जति मोह राखे पनि जीवनका लागि जीवन केही होइन। मृत्यु नै जीवनको नियति भएकाले मृत्युपश्चात जीवन महत्त्वहीन हुन्छ।'
« Reply #5 on: February 04, 2018, 01:01:50 AM »
~मनु ब्राजाकी~Manu Brajaki
आगोले त पोल्छ-पोल्छ पानीले झन् पोल्छ
बोल्नेले त बोल्छ-बोल्छ नबोल्ने झन् बोल्छ ।
आफूलाई बेच्न खोज्यौ भने बुझिराख
किन्नेले त मोल्छ-मोल्छ नकिन्ने झन् मोल्छ ।
मनमा पर्दा लगाएर बसेका छौं किन ?
नाङ्गोले त खोल्छ-खोल्छ पर्दाले झन् खोल्छ ।
रङ्गीन यो दुनियाँमा आँसुसित रगत
घोल्नेले त घोल्छ-घोल्छ भिज्नेले झन् घोल्छ ।
दुख्ख आए पनि दुख्ख, गए पनि दुख्ख
पीर बसे पनि पिर्छ गए झन् पिरोल्छ ।
एकान्त मन पराउने ‘मनु’ घुइँचोमा,
एक्लो हुँदा आफूलाई आफैंले छिचोल्छ ।
(स्रोत : मधुपर्क २०६५ माघ)
« Reply #6 on: February 04, 2018, 01:02:51 AM »
पानी खाँदा सर्किएला होस गर
तीर्खा फेरि फर्किएला होस गर ।
बाँचेजस्तो मर्न कहाँ सजिलो छ,
काल पनि झर्किएला होस गर ।
हिमालको मुनि बस्दा ओत होला,
पहिरो पो घर्किएला होस गर ।
उकालोमा दुवै गोडा ठीक थिए,
ओह्रालोमा मर्किएला होस गर ।
ऐना हेर्दा सम्हालेर हेर्ने गर्नु,
आˆनै रूप चर्किएला होस गर ।
दुवै गाला अझै पनि सुख्खा नै छन्,
हृदयमै दर्किएला होस गर ।
ढुङ्गालाई धेरै माया नचढाऊ,
तिम्रो ‘मनु’ तर्किएला होस गर ।
(स्रोत : मधुपर्क २०६६ भदौ)
« Reply #7 on: February 04, 2018, 01:04:02 AM »
गएपछि आउँदैन कोही फर्केर
नजानु है कसैसित पनि झर्केर
घुइँचोमा एक्लै हुनुपर्छ कहिले त,
कहिले हिँड्नुपर्छ आफूदेखि तर्केर ।
आफूलाई मात्र हेर्न खोज्नेहरूको,
आफ्नै घरको ऐना पनि फुट्छ चर्केर ।
दिनभरि बटुलेको दुःख नै त हो,
त्यही पनि रातभरि बग्यो दर्केर ।
चोखा नै छन् ‘मनु’हरू दैवभन्दा त,
के हुन्छ र व्यर्थै सुन-पानी छर्केर ।
« Reply #8 on: February 04, 2018, 01:04:23 AM »
जसको मुटु ढुङ्गाजस्तो देखेँ मैले
त्यसैमाथि आफ्नो नाम लेखेँ मैले
जतातिर बल्यो आगो उतैतिर
प्रतीक्षामा आफ्नो हात सेकेँ मैले
चौबाटोमा उभिएर सोच्दै छु म
कुन बाटोमा खुट्टा आफ्ना टेकेँ मैले ?
मध्याह्नमा हिँड्दा लाग्न थालेको छ
आफ्नो छाया आफूले नै छेकेँ मैले
‘मनु’लाई भेटेपछि गन्न थालेँ
गुमाएछु जिन्दगीमा के-के मैले ?
« Reply #9 on: February 04, 2018, 01:04:38 AM »
माया भन्ने तिम्रो नासो जब मैले मासिदिएँ
एकपटक रोएँ अनि आँसु पुछी हाँसिदिएँ
जता गए पनि यहाँ बाटो कुर्नुपरेकै छ
दिक्क मानी चौतारीमै आफ्नो फोटो टाँसिदिएँ
रनवन रमाएर हिँड्नुपर्ने यस्तो बेला
एकल्काँटे आफूलाई एकान्तमै फाँसी दिएँ
यति धेरै आफन्त र आफ्नाहरू भए यहाँ
बरू एउटै शत्रुसित माया मैले गाँसिदिएँ
मिर्मिरे यो बिहानीमा पनि मैले मनको दियो
साँझ पर्यो भन्ने ठानी सलेदो उकासिदिएँ
‘मनु’ हाँसिरहेको छ दु:ख मेरो देखीदेखी
हिजो गाली गरे पनि आजचाहिँ स्याबासी दिएँ